Rosia: Andro iray ho fihetsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2009 17:41 GMT
Nibaliaka ny masoandro teto Mosko ny andron'ny 31 janoary, ambanin'ny 14° Celsius/7° Fahrenheit teo ho eo ny maripàna, nefa na teo aza ny hatsiaka, nahitàna fihetsehana maromaro ho fanoherana ny governemanta ny tanàna – ary fifanjevoana vitsivitsy. Ireto manaraka ireto misy fitantaràna fohy, sary, ampahan-tsary miaina, ary rohy vitsivitsy.
LJ drugoi dia nandefa sary sivy mikasika ny fihetsehan'ny mpanohitra tao Bolshaya Polyanka sady nanoratra toy izao (RUS):
Nahavita nidina an-dàlam-be indray mandeha indray tao Mosko ireo tanora mafana fo avy amin'ny mpanohitra androany. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tao Bolshaya Polyanka, ary ireo mpandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana […] dia nindrana làla-miolaka mba hamonjy io toerana io, nifindra fiaran-dàlamby tany anaty metro. Androany, na izany aza anefa, dia toa hita ho nahazo mpilatsaka an-tsitrapo (hitsikilo) ihany ny mpitondra (na, angamba koa, voakarama). […]
Tamin'ny fotoana izay nahitàna “mpanohitra” tokony ho 50 hatramin'ny 80 any ho any milanja saina sy sora-baventy nanomboka nirotsaka tao an-dàlambe mamakivaky an'i Polyanka, dia nisy fiara vitsivitsy nisosososo nisongona azy ireo avy any aoriana ary – miaraka amin'ny fitenenana hoe, “ fa nahoana izahay no tsy avelanareo hitsotsotra [hiaina], ry le****ireto?” – dia nisy olona 10 na 12 teo nivoaka avy any, nitovy fitafy daholo amina pataloha jogging, jeans sy gilets misy satrony. Tsy nisy andraso andraso, tonga dia nidaroka ireo mpanao fihetsehana ireo andian'olona ireo, ary fiatombohana ady saritaka be izay.
Somary nisy fisavoritahana ihany tany amboalohany tao anaty filaharan'ireo “mpanohitra”‘, nefa nalaky nilamina sy nirindra ry zareo ka afaka nanohitra ireto mpanafika ihany. Tamin'ireo mpanao fihetsehana, nisy olona feno rà ny tavany, iray tamin'ireo mpitatitra vaovao kosa no nisy nitoraka vato ny camera nentiny, saingy voatery nanao tari-dositra ihany ireo mpanafika ary saiky mbola nifanenjehana [natao haza lambo] aza raha tsy nanapa-kevitra hanohy ny diabeny ireo mpanohitra mafana fo.
Tany amin'ny faran'ny gidragidra, nisy tamin'ireo nisaron-tava tamin'ny sampina [écharpes] no nanipy baomba mandatsa-dranomaso. Maro tamin'ireo tratr'izany no tsy maintsy nanàsa ny masony.
Efa taorian'ny nahataperan'ny hetsika vao tonga ireo mpitandro filaminana mpandrava fihetsiketsehana, ary dia [manamboninahitra] polisy roa monja avy amin'ny toby tsy lavitra teo no nanatanteraka ny asan'ireo sampan-draharaha misahana ny fampandriana fahalemana, teo ambany fanaraha-mason'ny angidimby [helicopter] iray manga antitra nisidina teo ambonin'i Polyanka.
Matetika izy ireo no niditra tamin-pahasahiana teny anivon'ireo olona mpanao fihetsehana, mba nanàndrana hàka ireo sora-baventy. Vao mainka niteraka fanoherana mafy izany, nefa koa ireo mpanohitra dia nànana vahoaka maro ary [ireo manamboninahitry ny police] dia mazàva be fa tsy nànana velively ny mokon-doha hifanenjana [hifanandrina] amin'izy ireo.
Kivy, niolomay nankeny amina vondrona tafika iray tsinjony nijoro teo amoron-dàlana teo ny iray tamin'ireo mpitandro filaminana, ary niangavy azy ireo mba hirotsaka an-tsehatra amin'ity asa sarotra ho fitandroana ny filaminam-bahoaka ity. Nampifandondona ny tongony roa fotsiny no nataon'ilay zandriny indrindra tamin'ireo, fa tsy nandeha nisedra [hanohitra] velively ny safidim-bahoaka izy.
Eto am-pamaranana, tanteraka ihany indray ny fidinana an-dàlambe nataon'ny mpanohitra, ary maro kokoa noho izay nosainina ny fivezivezena androany. Ny andiana mpitandro filaminana mpandrava fihetsiketsehana, izay efa taraiky vao tonga[…], dia nisambotra izay sendra ny tànany teny – mpaka sary iray [cameraman], ohatra, miaraka amin'ny Betacam iray goavana eny an-tsorony – nampiditra azy ireny tao anaty fiaran'ny mpitandro filaminana ary dia lasa nandeha. Teo ambonin'ny toerana teo dia nisy angidimby iray an'i mpitandro filaminana nijijy am-pitoerana -ny hany sisa nataony dia ny nanamarika fa tontosan'ireo “mpanohitra” izay nokasain'izy ireo natao androany.
zyalt mpampiasa LJ dia nandefa sary 30 eo ho eo avy amin'io fihetsehana io ao amin'ny fiombonambe LJ namarsh_ru izay an'ny mpanohitra.
I Oleg Klimov, Rosiana mpaka sary dia nandefa sary vitsivitsy mampiseho an'i Eduard Limonov filoha nasionalin'ny Bolshevik, ilay nanàndrana nitarika fihetsehana iray hafa – valy bontana ho an'ny hetsiky ny Antoko Kaominista tao an-kianjan'i Triumphalnaya. Ireto ny sasantsasany tamin'ireo fanamarihan'i Klimov (RUS):
[…] Ny kianjan'i Triumphalnaya , manoloana indrindra ny sarivongan'ilay poeta Vladimir Mayakovsky, dia nohodidinin'ny mpitandro filaminana mpandrava fihetsiketsehana – ary foana [tsy nisy olona]. Na dia hipoka olona aza teo amin'ny fidirana handray metro, tsy nomena alàlana hihazo ny tsangambaton'ilay “poetan'ny fiovàna” – ary dia nitàtatata tokoa ireo fampitam-peo [loudspeaker] niteny mafy azy ireo hoe : “Tapitra ny hetsika! Ndeha mody!” Mpanao gazety ny maro tamin'ireo olona teo ary tsy te-hiparitaka velively ry zareo. Niandry izy ireo. Niandry na dia teo aza ny fahitàna fa be ireo mafana fo avy amin'ny National Bolshevik sy ireo tanora hafa koa no efa voasambotra sy nafatratra tao anaty fiaran'ny mpitandro filaminana.
Nikisaka izahay [avy aty ambadikin'ny kianja] ary toa tsy nisy nahatsikaritra anay akory ny olona. Nanomboka ny kabariny i Limonov teo akaikin'ny sarivongan'i Mayakovsky. Efa nanomboka niakatrakatra ihany ireo vahoaka nanoloana ny metro, saingy mbola nogiazan'ireo mpitandro filaminana. Nisy mpanao gazety vitsivitsy tafaporitsaka ihany anefa; ary nihazakazaka nankeny amin'i Limonov. Nirohotra nanenjika azy ireo mpitandro filaminana mpandrava fihetsiketsehana. Be ny zavatra nitranga nanodidina an'ilay mpanoratra revolisionera [mpanoratry ny fanovàna] [Limonov]. Nanohy niteny izy, indrindra fa mikasika ny “fahalalàhana, firahalahiana ary ny fitovian-jo”, voahodidin'ireo mpiaro azy manokana, fa tamina fotoana tsy voafaritra dia nisy roalahy goavam-be niara-niantsampy nanao amboletra ireo mpiaro an'i Limonov ary namely ny iray tamin'izy ireo teo amin'ny tetezan'orony. Toy ny hoe ady tsotra ireny ihany ilay izy. Voatsipy teny ambony tara i Limonov, nefa, amin'ny maha mpitolona ho amin'ny fanovàna efa zatra ady azy, dia mbola niezaka nanàla ny solomasony izy, mba tsy ho vaky, mazava loatra. Nanao izay ho afany ireo mpiaro mba hiarovana azy, saingy efa tonga teo ireo mpitandro filaminana mpandrava fihetsiketsehana, ary dia nifarana toy ny efa fahita izy ity – nikaratoka ireo varavaran'ny fiaran'ny mpitandro filaminana […].
Tsy nanan-katao afa-tsy ny nijery ny fizotr'izay rehetra izay fotsiny ireo olona marobe nanotrona teo – toy ny an-kafaliana tsy miafina aza. Tsy nisy na iray aza sahy niloa-bava. Tsy nisy nihogahoga. Tsy nisy nifandrangitra… nandinika fotsiny ny maro, toy ireo mpanao gazety maro teo. Nijery ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy maha maty manota ataon'ireto “saka” izay tsy tia “voalavo kely” iray tsy volom-batolalaka.
Alahelo sy hasorenana lalina no naterak'izany, satria, araka izay nolazain'i Johann Goethe, raha ny faminavinako azy, – “Tsy misy andevo sarotra avotana noho ireo izay mihevitra ny tenany ho olona afaka.
Ity ambany ity ny ampahan-tsary tamin'ny zava-nitranga tao an-kianjan'i Triumphalnaya, nalefan'i zlaya-uchilka: mpampiasa LJ
Araka ny hevitr'i alaverin mampiasa LJ (RUS), dia handany ny alina manontolo sy ny voalohan'ny volana Febroary any amin'ny biraon'ny mpitandro filaminana i Eduard Limonov.
Nisy hetsika iray nataon'ny mpomba an'i Kremlin koa teo amin'ny kianja “Mena” tamin'ny 31 janoary. I drugoi mpampiasa LJ dia nandefa sary iray tamin'ireo sora-baventy tamin'io hetsika io: “Mino izahay!” – teo ambanin'ny sarin'i Dmitry Medvedev sy Vladimir Putin. Ny sasantsasany amin'ireo mpamakin'i drugoi dia nihevitra fa zava-mahazatra sy efa fahita ny sora-baventy, amin'ny fomba fijery roa samihafa:
Noheveriko tany amboalohany fa sarin'i Obama ilay izy.
Ho ela velona ny CPSU.
Tena latsa-paka ao am-pon'ny olona ny USSR raha toa ka 20 taona aty aoriana dia mbola ahitàna sora-baventy tahaka ireny ihany.
Tsy mbola nanjavona tanteraka izany, somary nampangatsiahina kely fotsiny [nampatoriana], Putin mba ho solon'i Lenin, [Medvedev] ho solon'i Stalin, ary ny CPSU dia niova anarana ho azy ho [ny antokon'i Rosia mitambatra].
I mutin2007 mpampiasa LJ dia nandefa sarimiaina mampihomehy ahitàna ondry, ka ao anatin'io no ahitàna ireo biby manangana sora-baventy misaotra ny mpitondra tamin'ny fisondrotam-bidin'ny fiainana sy ny fandroahana, ankoatra ireo zavatra hafa.
Ankoatra izay koa, i mutin2007 dia nandefa sary pika avy amin'ny hetsika nitranga iny andro iny ihany nanerana ny làlana namakivaky an'i Rosia, tao Vladivostok: vondrona mpanohitra iray no nilanja sora-baventy nisy ny soratra hoe “Putler kaput!!!” teo amboniny.
I bwm mpampiasa LJ dia nandefa sary efa ho 16 momba ny hetsika tao Vladivostok, nokarakarain'ny Antoko Kaominista sy ny Fivondronam-ben'ireo Olon-tsotra mafana fo ao Rosia (TIGR), ary nanoratra an'ity (RUS):
[…] Naka endrika mahatsikaiky ilay diabe satria ny mafana fo avy amin'ny [TIGR] dia tsy nànana velively zavatra iraisana amin'ny Kaominista – na izany amin'ny fomba fiseho ety ivelany, na izany amin'ny fijery politikan'izy ireo.
Saingy be tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana no olona tsy mpikambana velively amina fironana politika, fa kosa tsy afaka ny hinia tsy hahalala ny tena zava-misy manodidina azy ireo. […]